ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနှစ်ဖက်ဒေသရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက် အတူတကွဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြော - Xinhua News Agency
ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား နှစ်ဖက်ဒေသရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကို နားလည်သဘောပေါက်ရေးအတွက် အတူတကွရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း တရုတ်ပြည်မကြီး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ၏ မူလ ရည်မှန်းချက်နှင့် မစ်ရှင်က တရုတ်ပြည်သူများအတွက် ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အားသစ်လောင်းမှုအား ရှာဖွေဖို့၊ ထိုင်ဝမ် တစ်နယ်တည်းသားများ အပါအဝင် တရုတ်ပြည်သူများအားလုံး ကောင်းမွန်သောဘဝ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ထိုင်ဝမ်ရေးရာရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျူးဖုန့်လျန်က ပြောခဲ့သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုက်လျှောက်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောဘဝက ထိုင်ဝမ်ရှိ ပြည်သူများရဲ့ အဓိကခံယူချက်ဖြစ်ပြီး ထိုင်ဝမ် တစ်နယ်တည်းသားများ၏ ဘုံရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကျူးက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
CPC ၏ ခိုင်မာသော ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ရပ်တန့်နေရာမှ ကြီးမားသော အသွင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာလျက် အားကောင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး၏ ကြီးမားသော အကျိုးဆက်ရရှိရန်နှင့် ရေလက်ကြားနှစ်ဖက်ဒေသရှိ ပြည်သူများအားလုံး၏ ချမ်းသာသုခ မြှင့်တင်ရန် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
People on both sides of Taiwan Strait should work together for national reunification: spokesperson
BEIJING, Jan. 12 (Xinhua) — People on both sides of the Taiwan Strait should work together toward the realization of national reunification,aChinese mainland spokesperson said Wednesday.
“The original aspiration and the mission of the Communist Party of China (CPC) is to seek happiness for the Chinese people and rejuvenation for the Chinese nation, and to enable all Chinese people, including Taiwan compatriots, to liveagood life,” said Zhu Fenglian,aspokesperson for the Taiwan Affairs Office of the State Council.
The pursuit of peace, development, andagood life isamainstream public opinion in Taiwan andacommon aspiration of Taiwan compatriots, Zhu noted.
Under the strong leadership of the CPC, the Chinese nation has achievedatremendous transformation from standing up and growing rich to becoming strong, and has become more capable and confident to accomplish the great cause of national reunification and improve the wellbeing of people on both sides of the Strait, the spokesperson said. Enditem
Photo : Zhu Fenglian,aspokesperson for the State Council’s Taiwan Affairs Office, attendsapress conference in Beijing, Nov 10, 2021. [Photo/Xinhua]